चार अदुवाले गाउँ नै ढपक्कै
अरुणठाकुर (सिन्धुली), भदौ २३ गते । दुई दशकअघि सिक्किमको पेदुङबाट ल्याएको चार बोट अदुवाले यतिखेर सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको अरुणठाकुरलाई नै छपक्कै ढाकेको छ । राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि अरुणठाकुरका (साविकको पुरानो गाविस) कृषकले पाखो बारीमा मकै र कोदो रोप्न छाडेर अदुवा खेती सुरु गरेका हुन् । ‘शिक्षा र अदुवा खेती, अरुणठाकुरको नीति’ भन्ने नारा बनाएर कृषकले घरघरमा सुरु गरेको अदुवा खेतीबाट उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन मात्रै आएको छैन, मनग्ये आत्मविश्वास पनि जागेको छ । मकै र कोदो खेतीभन्दा अदुवाबाट आम्दानी तेब्बरभन्दा बढी भएपछि यो खेतीतर्फ आकर्षण बढेको कृषक बताउँछन् । स्थानीय कृषकका अनुसार अरुणठाकुरमा वि.सं. २०४२ तिर अदुवा खेतीले प्रवेश पाएको हो । गाउँकै कृषक आसमान तामाङले त्यतिबेला मसलाका लागि भनेर सिक्किमको पेदुङबाट ल्याएको बोसे जातको चार झ्याङ अदुवाले व्यावसायिक रूप लिएर अहिले सिङ्गो गाविस नै ढाकेको हो । अदुवा खेतीबाट बर्सेनि ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी लिँदै आउनु भएका स्थानीय कृषक रत्नबहादुर तामाङ मकै र कोदो खेतीको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले आफूले १२ वर्षदेखि अदुवा खेती गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, अदुवाको आम्दानीले घर खर्च मात्र टरेको छैन, आर्थिक हैसियतमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ । मैले पनि यो वर्ष सात कट्ठा जमिनमा यो खेती गरेको छु । अदुवाकै आम्दानीबाट सबै कृषकले इच्छा अनुसारको खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्छौं । अदुवा खेतीमा संलग्न कृषकका अनुसार उत्पादित अदुवा सिजन अनुसार प्रतिधार्नी १५० रुपियाँदेखि तीन सय रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । उत्पादित अदुवा स्वदेशका काठमाडौँ, धरान, वीरगञ्ज र विराटनगर हँुदै भारतको दिल्लीसम्म निकासी हुने गरेको छ ।
उचित मूल्य र बजारको सरल पहँुचका कारण अरुणठाकुरका करिब ९० प्रतिशत बासिन्दा अदुवा खेतीमा संलग्न रहेका अर्का कृषक नरबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अरुणठाकुरका करिब आठ सय घरपरिवारमध्ये सात सयभन्दा बढी घरपरिवारले व्यावसायिक अदुवा खेती गरेका छन् । अदुवा खेती गरेर प्रतिपरिवारले बर्सेनि कम्तीमा ५० हजार रुपियाँदेखि बढीमा चार लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
एक घरले न्यूनतम दुई कट्ठा जमिनदेखि अधिकतम चार विघा जमिनमा अदुवा खेती गरेका पाइन्छ । स्थानीय कृषक सोमबहादुर बल आफूले करिब चार बिघा जमिनमा अदुवा खेती गरेको बताउनुहुन्छ । बर्सेनि आफूले अदुवा खेतीबाट तीन लाख रुपियाँसम्म कमाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । आफ्नो जाँगर, मिहिनेत र लगनशीलता छ भने अदुवा खेतीबाट अरब जाने व्यक्तिले जत्तिकै गाँउमै धन कमाउन सकिने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । कृषक बल भन्नुहुन्छ, धन कमाउन किन जानु प¥यो विदेश ? यहाँका कृषकलाई त आफ्नै गाउँ अरब पल्टिएको छ । उत्पादित अदुवा बिक्री गर्न छिमेकी दुधौली बजारमा पु¥याउनु पर्ने बाध्यता रहेको खेतीमा संलग्न कृषक बताउँछन् । बिक्री नभएको अदुवाबाट कृषकले धूलो मसला, सुठो, चकलेट र क्यान्डी बनाई बिक्री गरी आम्दानी लिँदै आएका छन् ।